KalaSansar, One of the Nepal's Entertainment Portal,Cheap,cheaper,cheapest Hosting Company
कला र संघर्ष
विज्ञापन हाम्रा सेवाहरु
नेपाली सांगीतिक एल्बम
लेख,रचना तथा मनोरञ्जनका समाचार पठाउनु परेमा info@kalasansar.com मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
विज्ञानमा नेपाली आविष्कार	कुनै पनि देशको महत्वपूर्ण सम्पत्ति भनेको मानव मस्तिष्कलाई नै मान्न सकिन्छ । संसारका कयौं देशहरुले यही मस्तिष्कलाई प्रयोग गरेर २१ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा निक्कै विकास गरिसकेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले देखाउँछ । जहाँ शिक्षित मानिसहरुको जमात हुन्छ त्यहिँबाट नै विकासको शुरुवात हुन्छ । हालसालै बुटवलका व्यस्त मानिसका दैनिक जीवनमा पर्ने विभिन्न समस्याहरुको समाधानको उपाय निकालेका छन्, रूपन्देहीको लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेज भलबारीका विद्यार्थीहरुले । बीई इन्जिनियरिङ गरिरहेका उनीहरूले एसएमएस बेस्ड होम अप्लायन्स कन्ट्रोलर बनाएका छन् । यसका लागि घरमा एसएमएस सुविधा भएको एउटा डिभाइस राखिन्छ । त्यसपछि घरका प्रत्येक विद्युतीय स्वीचका नम्बर तोकिन्छ । त्यसैको सहयोगमा जुनसुकै मोबाइलबाट पनि एसएमएस गरेर घरका स्विच आफैं खुल्न र बन्द गर्न सकिन्छ ।
दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न सकिने यो प्रविधि खासै महँगो पनि छैन । करिब १० हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने हो भने सबै काम गर्न सकिन्छ । यो प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने आफू बाहिर भए पनि लोडसेडिङ भइरहने समयमा बिजुली आएपछि घरमा पानी तान्ने मेशिन चलाउन, बत्ती बाल्न वा निभाउन, पंखा बन्द गर्न ईत्यादी कुराहरुगर्न सजिलो बनाइदिएको छ । विद्यार्थीहरूले बनाएको यो प्रविधि उनीहरू अध्ययनरत कलेज र जिल्लाका विभिन्न कार्यालयहरूले प्रयोग गर्न नाम टिपाइसकेका छन् ।
यी विद्यार्थीले वाटर लेभल कन्ट्रोलर अर्थात ओभरहेड ट्यांकी खाली भए स्विच आफैं खुल्ने भरिए आफैं बन्द हुने प्रविधि पनि बनाएका छन् । कक्षामा समयअनुसार घण्टी बज्ने, व्यक्तिपिच्छे पंखा र बत्ती खुल्ने वा बन्द हुने प्रविधिको विकास पनि उनीहरूले गरेका छन् । विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र थप काममा प्रेरित गर्न यी दुई प्रविधि सोही कलेजले उपयोग गरेको हो ।
कलेजले प्रयोगमा ल्याएपछि विद्यार्थीहरूको प्रविधि अहिले रूपन्देहीका दुई दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा उपयोगमा आइसकेको छ । विद्यार्थीहरूले रोटेटिङ विल्डिङ अथवा घुम्ने घर पनि बनाएका छन् । विकसित देशमा सूर्यको प्रकाश र हावाअनुसार घरलाई मोड्न, वस्तुशास्त्रअनुसार राख्न, अपार्टमेन्टमा बसेर सबै क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्न यस्ता घर प्रयोग गरिन्छ । सहरीकरण भइरहेको नेपालमा यो घरप्रतिको चासो बढेकाले यस्तो प्रविधि बनाएको सिभिल इन्जिनियरिङ गरिरहेका विद्यार्थीहरु बताउँछन् । तातोमा चिसो र चिसोमा तातो हुने वातावरण अनुकूलित घर र हावा अनुकूल भित्ता बनाउने प्रविधि पनि विद्यार्थीहरुले बनाएका छन् । भूकम्परहित घर बनाउन माटो जाँच्ने प्रविधि तथा छडको क्षमता पत्ता लगाउने प्रविधि जस्ता अत्यावश्यक र व्यावहारिक प्रविधिहरु पनि विद्यार्थीहरुले बनाएका छन् । विद्युतीय मतदान प्रक्रियाको प्रयोग थालेको नेपालमा त्यसलाई विकसित गरी विद्यार्थीहरूले एकैपटक मतदाता र मतसंख्या गन्न सकिने प्रविधि पनि बनाएका छन् । पढाइको समयमा आफूले सिकेको सीप खेर नजाओस् र त्यसलाई व्यवहारमै उतार्न सकियोस् भनेर व्यावहारिक वैज्ञानिक उपकरण बनाएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । विद्यार्थीहरूका व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक उपकरणको प्रचार र बजार प्रवद्र्धनका लागि लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजले विज्ञान प्रदर्शनी आयोजना गरिसकेको छ । प्रदर्शनीको रूपन्देहीका करिब दुई दर्जन विज्ञान कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले अवलोकन गरेका थिए ।-
Send this Page Automatically to your Friends
विज्ञानमा नेपाली आविष्कार का लागि प्रतिकृया दिनुहोस् ।
नोट :- गालीगौलज तथा अपशब्दहरु प्रयोग भएका प्रतिकृया प्रकाशित गरिने छैन् ।( नाम अनिवार्य छ । )
Please type the Number Shown in the Picture	... ... ... ...
सम्बन्धित शीर्षकहरु	पहिलो उड्ने कारको सफल परिक्षण
विज्ञानमा नेपाली आविष्कार
ग्रह,उपग्रहमा जीवनको सम्भावना छ?
पृथ्वीजत्रै ग्रह फेला परे
इश्वरीय तत्व फेला
New Switch Improve Electronics
Original Thinkers Likely to Cheat
3-D Imaging Facilitates
शिशुको बाबु पत्ता लगाउन डीएनए परीक्षण
Qualcomm challenges LCDs
मंगलग्रहमा रोबोटिक्स यान प्रक्षेपण :
पहिलो उड्ने कारको सफल परिक्षण	विज्ञानमा नेपाली आविष्कार	ग्रह,उपग्रहमा जीवनको सम्भावना छ?	पृथ्वीजत्रै ग्रह फेला परे	इश्वरीय तत्व फेला	New Switch Improve Electronics	Kilobots Are Leaving the Nest	Men Think About Sex All Day Long	Original Thinkers Likely to Cheat	3-D Imaging Facilitates	सूचना प्रबिधी
मोबाइलफोन स्वास्थ्यकालागि कतिउचित ?	एक सेकेण्डमा एक खर्ब तस्वीर	अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही	चियाबारीमा वाइफाई इन्टरनेट स्वास्थ्य र सौन्दर्य Health & Beauty
मुहारको सरल श्रृङ्गार	डण्डिफोरबाट मुक्त हुने हो कि ?	प्रतिघाण्टा दुई नेपालीको मृत्यु	मोटोपन घटाउने हो ?	कपाललाई कसरी स्वस्थ राख्ने ?	गृहपृष्ठ
©, All Rights Reserved. KalaSansar.com